Linux Mint 20.1 ikozvino inogona kuyedzwa sekutanga beta | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga kwemwedzi uno, Clement Lefebvre akaenderera mberi kuti vhezheni inotevera yehurongwa iyo yaanogadzira nechikwata chake yaizosvika paKisimusi. Pachine vhiki yekumberi, zvirinani munyika dzakaita seSpain, mhemberero idzi dzinotanga zviri pamutemo, uye kwemaawa mashoma isu tinogona kutoedza Linux Mint 20.1, asi kwete mushanduro yakagadzikana, asi mune yayo yekutanga beta. Kufanana nekugoverwa kwakawanda, Lefebvre inoita kuti mifananidzo iyi iwanikwe kwatiri kuyedza nekumhan'arira zvinogona kuitika zviputi.
Pachezvangu, vhiki rinoita senge ipfupi nguva yekuyedza iyo inoshanda system, kubvira mazuva ano unofanirwa kutsvaga mabugs uye woagadzirisa, asi ndozvinoita timu yeLinux Mint uye iyo beta 1 kazhinji inosvika mukati menguva dzakatarwa. Chero zvazvingaitika, Peppermint ndeye unofficial flavour yeUbuntu uye kana paine matambudziko, izvi zvinofanirwa kuve zvakanyanya pane desktops / graphical nharaunda kupfuura pachigadziko.
Linux Mint 20.1 ichatevera paLinux 5.4
Pakupera kwaNovember, timu yeLinux Mint yakaburitsa zvakare vhezheni nyowani yemifananidzo yavanogadzira, a Cinnamon 4.8 izvo zvinouya neshanduko dzinonakidza. Iyo vhezheni inosanganisirwa ndeye 4.8.3 Uye, zvinofanirwa kutaurwa, ndiyo yakachena Linux Mint, nekuti ndipo panogadziriswa zvakanyanya nevagadziri vayo. Inowanikwawo muMATE uye Xfce, asi aya madhesiki asingavimbe navo.
Linux Mint 20.1, iyo ichauya pasi pekodename Ulyssa, ichaenderera neLinux 5.4, iyo kernel iyo inoshandisa iyo Focal Fossa iyo yakavakirwa. Asi iyo vhezheni inosvika mumazuva mashoma haina kubva paiyo vhezheni yeUbuntu yakaburitswa muna Kubvumbi, asi pane yayo yekutanga kudzokorora, kana chii chakafanana, pa Ubuntu 20.04.1. Kana zviri zvemamwe magiraidhi enharaunda, Ulyssa anosvika muMATE 1.24 uye Xfce 4.14.
Linux Mint 20.1 Beta 1 ikozvino inogona kutorwa kubva kuseva yeprojekti, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 20.1 ikozvino inogona kuyedzwa sekutanga beta
Uye iwe haugone kugadzirisa kubva makumi maviri kusvika beta izvi? Ndinozvitaura nekuti mint betas, vanovadaidza kuti betas, asi ivo vakadzikama zvachose muchokwadi, unogona kuvaisa pasina kutya, uyezve gare gare iyo imwechete beta, pasina iwe uchifanira kuita hapana chinova chakatsiga, ndinoziva nekuti ndakaiswa mint betas yakaiswa, asi kubva pakutanga, ndinofunga kune vanhu vanga vamboita yekuvandudza asi handizive kuti zvichave sei.
Pindura kuti guuuuu
Ndanga ndichiedza Linux Mint beta kwemakore uye ini ndinokuvimbisa kuti kubva kushanduro idzi kusvika kwekupedzisira, pane mashoma misiyano. Aya mabetas agara achizivikanwa nekugadzikana kwavo kukuru.
Stunt Rally - Yemahara rally simulator ine mupepeti ...